Momba anay | Jiangxi Royal Import & Export Co., Ltd.
izahay, Jiangxi Royal Import & Export Co., Ltd., manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny Hot Stamping Foils, Film Holographic, Film Iridescent / Dichroic, Film Iridescent / Dichroic Window, Film PVC / TPU Iridescent, Chemical Fine sns.
Ao amin'ny rafitry ny valiny Just In Time (JIT) izahay izay manome antoka ny fanontanianao sy ny takiana fa ho voavaly tsy misy hatak'andro, manampy anao hizatra amin'ny toe-javatra tsena azo ovaina miaraka amin'ny serivisy mahomby.
Hatramin'ny nananganana anay dia nandray fepetra fanampiny izahay hitazonana ny kalitao avo lenta. Ny mari-pankasitrahana dia azo omena arakaraka ny filanao, toy ny SGS, TST, REACH, tatitra momba ny kaontin'ny orinasa, manana zavatra betsaka lavitra noho izay ilainao izahay.
Miantehitra amin'ny fahamendrehana, serivisy tsara ary fanavaozana, dia manao izay ezaka lehibe indrindra izahay mba hahazoana antoka ny kalitao avo indrindra ho an'ny mpanjifanay. Nandritra ny taona maro nivoarana, nitombo tsy an-kijanona ny volan'ny orinasantsika sy ny tombotsoantsika ary ekipa manam-pahaizana momba ny varotra iraisam-pirenena no nozarina. Nanangana fiaraha-miasa maharitra izahay miaraka amin'ny mpanjifa avy any Azia, Amerika ary Eropa. Ankoatr'izay, jerena manokana ihany koa ny fampandrosoana ny kolotsaina orinasa. Ny tanjonay dia ny hitombo ka ho lasa orinasa maoderina miavaka.
Mifandraisa aminay izao! Kitiho fotsiny hahitanao mpamatsy azo itokisana any Shina ary avy eo ho lasa mora sy malama kokoa ny orinasanao. Hiezaka mafy araka izay tratra izahay hihaona amin'ny fahafaham-ponao. Tsy mbola tara ny manomboka manomboka izao ~
Tsy Nivadika dia ny tsipika farany ambany amin'ny fenitra ara-moraly napetrakay ihany, ary ny andraikitra ara-tsosialy no adidy tokony horaisintsika.
Customer Focus- Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tanjona faratampon'ny asantsika rehetra.
Teamwork- Fantatsika tsara fa ny ekipa miray hina, miara-miasa, mifampatoky ary miara-miasa ihany no afaka manampy ny orinasa hivoatra ara-pahasalamana.
Innovation-Ny famakiana tsy tapaka ny rafitra voajanahary dia ny hery mitazona ny fampandrosoana maharitra ny orinasa. Andraikitsika koa ny mitady vokatra tonga lafatra sy fomba fiasa mahomby.